11 လက်မလျှပ်စစ်စကူတာစက်ရုံ - တရုတ် 11 လက်မလျှပ်စစ်စကူတာထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
တရုတ်နိုင်ငံထုတ် 11 လက်မ trottinette လျှပ်စစ်ခေါက်နိုင်သောလျှပ်စစ်စကူတာ
10000W စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် မြန်နှုန်းမြင့် brushless မော်တာများ၊ 72V 40AH လီသီယမ်ဘက်ထရီ၊ အစွမ်းထက်၊ တက်ရန်လွယ်ကူ၊ မိုင်အကွာအဝေး 90-100km ခန့်၊ 110km/h အထိ အရှိန်တင်နိုင်ပါသည်။
၁၁ လက်မ လမ်းကြမ်းတာယာလမ်းကြမ်းတာယာများ ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော လေဟာနယ်၊ သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ပိုအားကောင်း၊ တုန်ခါမှု စုပ်ယူမှု ပိုကောင်း၊ ဆုပ်ကိုင်မှု ပိုအားကောင်းသည်၊ ဘေးကင်းပြီး သက်တောင့်သက်သာ မောင်းနှင်နိုင်သည်။
Portable folding scooter လျှပ်စစ်စကူတာ ခေါက်နိုင်၊ ခေါက်နိုင် အလွန်အဆင်ပြေ၊ ခေါက်ရလွယ်ကူသော ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး အိမ်သုံး၊ ရုံးတွင် သိမ်းဆည်းထားရန် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ခေါက်နိုင်သော ဒီဇိုင်းကောင်းလေးဖြစ်ပြီး၊ နေ့စဥ်အသုံးပြုရန် စံပြယာဉ်။
11 လက်မအရွယ် လမ်းကြမ်းတာယာ၊ တောင်များကို အနိုင်ယူနိုင်ပြီး မြို့တွင်းလမ်းများပေါ်တွင် စီးနင်းရာတွင်လည်း အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။ စိုစွတ်နေသော အထောက်အပံ့ဆိုင်နှစ်ခု၊ အကြီးမားဆုံးသော ရှော့ခ်စုပ်ယူမှုကူရှင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ကစားပေးပါသည်။
အရည်အသွေးကောင်း ဈေးပေါသော လျှပ်စစ်စကူတာ နှစ်ဘီး
လျှပ်စစ်စကူတာများ (သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင်ထိန်းညှိနိုင်သောလျှပ်စစ်စကူတာများ) သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ တိုက်ရိုက်လာသော်လည်း၊ ၎င်းတို့ကို ထုတ်ကုန်အတွက် အဓိပ္ပါယ်သုံးမျိုး သို့မဟုတ် လေးခုဖြင့် ဤအမည်ဖြင့် သီးခြားခေါ်ဆိုခြင်းမရှိပေ။တကယ်တော့၊ သူတို့ဟာ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းရဲ့ စွဲမက်ဖွယ်အောင်မြင်မှုတွေအတွက် သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကို ပေးဆောင်ရမှာပါ... တကယ်တော့ မင်းသား Michael J. Fox ဟာ "Back to the Future" ဇာတ်ကားထဲက Marty McFly က အသုံးပြုခဲ့တဲ့ စကိတ်ဘုတ်ကို မှတ်မိမှာမဟုတ်ပါဘူး။တော်လှန်သောလေယာဉ်သည် ဂန္ထဝင် "ဆန္ဒ၏အရာဝတ္ထု" အဖြစ် စုပေါင်းစိတ်ကူးစိတ်သန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာပြီး အနောက်ဈေးကွက်တွင် အောင်မြင်မှု၏အစမှတ်မှာ အဆိုပါစွန့်စားသယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးနည်းလမ်း၏ "ကုမ္ပဏီ" တွင်ရှိသော အမေရိကန်အနုပညာရှင်များစွာ၏ အများသူငှာ အသွင်အပြင်ဖြစ်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် Patinete electrico အရောင်းရဆုံး 10kw လျှပ်စစ်စကူတာ
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် မော်တာအတွက်6လ အခမဲ့ ပြုပြင်မှု၊ မားသားဘုတ်အတွက် 12 လ ပေးပါသည်။
2. ပြန်ပို့ခြင်းမူဝါဒ- ဝယ်သူသည် ချို့ယွင်းချက်ကို ပေးပို့နိုင်ပါသည်။မားသားဘုတ်သို့မဟုတ် မော်တာအား ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံသို့ အခမဲ့ ပြုပြင်ပေးသော်လည်း အောက်ပါ အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီရမည်-
aပထမ2လ (လက်ခံရရှိသည့်ထုတ်ကုန်မှ 1-2 လ) တွင်ဝယ်သူသည်တရုတ်နိုင်ငံသို့ပို့ဆောင်ခပေးဆောင်ပြီးဝယ်သူသည် DHL ကိုလိုချင်ပါက၊ ကွာခြားချက်ကိုပေးဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ခတတိယလ—၁၂လတွင်၊ ဝယ်သူသည် အသွားအပြန် ပို့ဆောင်ခအတွက် ပေးချေသည်။
ဂ။ထုတ်ကုန်၏ပြဿနာမဟုတ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသည် သေသေချာချာစစ်ဆေးပြီး ရလဒ်ကိုပေး၍ ဝယ်ယူသူထံ ထုပ်ပိုးပြီး ပြန်လည်ပေးပို့မည်ဖြစ်သော်လည်း ဝယ်သူသည် ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
10000w မြန်နှုန်းမြင့် 11 လက်မ တရုတ်လျှပ်စစ်စကူတာများ
ဒီထုတ်ကုန်ရေကြောင်းနှင့် ရထားပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကို အသုံးပြုပြီး ဥရောပသည် ရထားပို့ဆောင်ရေးကို အသုံးပြုသည်။နှစ်ခုစလုံးကို အခွန်ကင်းလွတ်ပြီး တံခါးဆီ ပို့ပေးပါတယ်။ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း သြစတြေးလျနှင့် ကနေဒါတို့က လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသာ ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ အမိန့်မထုတ်ပါနှင့်။ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း၊ ဥရောပနိုင်ငံများသည် တိကျသောတင်ပို့မှုအတွက် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်သွယ်မည်ဖြစ်ပြီး ၂ နာရီအတွင်း တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်သည်။
Hot 11inch 10000W လျှပ်စစ်စကူတာ 72v အသစ်
လျှပ်စစ်စကူတာ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို တိုတိုနှင့် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့် ယခုကြည့်ကြပါစို့။ကျွေးဖို့ သူတို့ဘက်ထရီလိုတယ်၊ မကြာခဏဆိုသလို လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းတွေလို ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီပါတဲ့ မော်ဒယ်တွေလည်း ရှိတယ်။
ဤဘက်ထရီအမျိုးအစားများသည် သင့်အား ကီလိုမီတာ 90 နှင့် 110 အကြား သွားလာရန် လုံလောက်သော စွမ်းအင်ကို အားဖြည့်ပေးသည် (အစောပိုင်းတွင် ဖော်ပြထားသော ကန့်သတ်ချက်များအရ)။
လက်တွေ့တွင် ၎င်းသည် အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်သည်- ကိုယ်ထည်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော အင်ဂျင်သည် ကေဘယ်စနစ်ကြောင့် ဘက်ထရီမှ လျှပ်စစ်အားကို လက်ခံရရှိသည်။လှည့်နေသောအင်ဂျင်သည် ဘီးများဆီသို့ လွှဲပြောင်းပေးသည့် ပါဝါကိုထုတ်ပေးပြီး လှည့်ခြင်းဖြင့် ကားကိုရွေ့လျားစေပါသည်။
အင်ဂျင်ပိုအားကောင်းလေ၊ လျှပ်စစ်စကူတာသည် မြန်လေဖြစ်ပြီး ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၎င်းသည် 32 km/h ထက်မပိုပေ။
လက်ကား trottinette လျှပ်စစ် foldable scooter လျှပ်စစ်စကူတာ
* ရေစိုခံစမ်းသပ်မှု၊ 5000W/10000W Brushless hub ပေါင်းစပ်မော်တာ -အရှိန်အလွန်မြန်သော
* ရောင်စုံ LED မီးလုံး 200 ကျော်၊ ပေါင်းစပ်အလင်းတန်းများနှင့် ပိုမိုတောက်ပသော ရှေ့မီး4ခု
* Bluetooth ချိတ်ဆက်မှု APP နှင့် 3-Speed ​​Gears Derailleur
* ဖုန်းများကို power bank နှင့် Remote control key unlock (အခမဲ့) အဖြစ် အားသွင်းပါ။
* ရှော့ခ်စုပ်ယူမှုငါးခု၊ Double Brake
* အာကာသယာဉ် - အဆင့်မီ အလူမီနီယံသတ္တုစပ်၊ ကျယ်ပြန့်သောဘောင်
* ခေါက်နိုင်သော၊ ချိန်ညှိနိုင်သောထိုင်ခုံနှင့် လက်ဘား
* Multi-function HD LCD မျက်နှာပြင်၊ ကျယ်ပြန့်သော နောက်ကာကာ၊ အခမဲ့ထိုင်ခုံ
ခေါက်နိုင်သောလျှပ်စစ်စကူတာ 72v 10000w လက်ကားထုတ်လုပ်ရေး
1. မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီက ဘယ်မှာလဲ။အဲဒီကို ဘယ်လိုသွားကြည့်ရမလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ Dongguan မြို့၊ Guangdong ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့ထံလာရောက်လည်ပတ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။
2. နမူနာယူလို့ရနိုင်မလား၊ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည် နမူနာပေးဆောင်နိုင်သော်လည်း နမူနာအခကြေးငွေနှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခကို ပေးဆောင်ရပါမည်။
၎င်းသည်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်7ရက်အလုပ်လုပ်ရန်သာလိုအပ်သည်။
3. MOQ ကဘာလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့၏ MOQ သည် 10pcs ဖြစ်သည်။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လိုအပ်ချက်အရ အရွယ်အစား၊ clocr၊ လိုဂိုကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
5. ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများကား အဘယ်နည်း။
A: T/T၊ L/C၊ paypal၊western union၊ စသည်တို့
6. ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ သင့်ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကို စမ်းသပ်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ပေးပို့ခြင်းမပြုမီ 100% စမ်းသပ်မှုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့တစ်ခုရှိပြီး မည်သည့်ပြဿနာကိုမဆို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။
trottinette electrique လျှပ်စစ်စကူတာ patinete electrico
1. 11 လက်မ Pneumatic & Anti-Skid Tyre
2. ခိုင်ခံ့သော ဆုပ်ကိုင်မှု၊ ဝတ်ဆင်မှုဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှု။မတူညီသောလမ်းများအတွက် သင့်လျော်သည်။
3. 10000W မော်တာ- အားကောင်းပြီး 100-115km/h ပြေး
4. သင့်ညဘက်စီးနင်းခြင်းဘေးကင်းစေရန်အတွက် ရှေ့မီး LED မီးနှင့် ဘေးကင်းရေးသတိပေးသည့် နောက်မီး၊ တောက်ပသောအနီရောင်မီး။
5. Shock Mitigation System: Dual shock လျော့ပါးရေးစနစ်သည် သက်တောင့်သက်သာ စီးနင်းမှုကို ခံစားနိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
6. ခေါက်လက်ကိုင်-စကူတာခေါက်နေချိန်တွင် သေးငယ်သောအရွယ်အစားကိုရရှိရန် ကူညီပေးသည်။
7. ဘရိတ်စနစ်-Theလျှပ်စစ်စကူတာရှေ့ဘီးနှင့် နောက်ဘီးတွင် ဒစ်ဘရိတ်နှစ်ခု တပ်ဆင်ထားသည်။
ဤနိုင်ငံ 26 နိုင်ငံအတွက် အခွန်လွတ် အမြန်ပို့ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးကူညီပါ-
ဒိန်းမတ်၊ စပိန်၊ အိုင်ယာလန်၊ နယ်သာလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ လစ်သူယေးနီးယား၊ ဟန်ဂေရီ၊ စလိုဗက်ကီးယား၊ ရိုမေးနီးယား၊ ဖင်လန်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ခရိုအေးရှား၊ သြစတြီးယား၊ အီတလီ၊
ဆွီဒင်၊ ပြင်သစ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ပိုလန်၊ အက်စ်တိုးနီးယား၊ ဂရိ၊ ဂျာမနီ၊ လူဇင်ဘတ်၊ လတ်ဗီးယား၊ စလိုဗေးနီးယား၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း။
*ဥရောပစတော့ရှယ်ယာ၊ Duty Free အမြန်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ခြင်း။ ဥရောပတွင်ရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
လုံခြုံရေးအရ၊ မိုးရွာတဲ့နေ့တွေမှာ မစီးပါနဲ့၊ လျှပ်စစ်စကူတာကို စိမ်မထားပါနဲ့။
လူကြီးများအတွက် 5000W*2 trottinette လျှပ်စစ်စကူတာလျှပ်စစ်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ / အများဆုံးစီးနင်းသူအလေးချိန် 200 ကီလိုဂရမ်
အခြားစကူတာများထက် ၅၅ ကီလိုဂရမ်သာ လေးလံသည်။
အားသွင်းချိန် 8 နာရီ။၇၈ မိုင်အထိ ပါဝင်ပါတယ်။
ရှေ့နှင့်နောက် ဆိုင်းထိန်းစနစ်ဖြင့် ခေါက်နိုင်သည်။
လက်ကိုင်ဘားတွင် အရှိန်နှင့် ဘရိတ်ကို တပ်ဆင်ထားသည်။
အလိုအလျောက် ရှေ့နှင့်နောက် LED မီးများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ပုံမှန်အတိုင်း 1 နှစ် ဘက်ထရီ လဲလှယ်ပေးပါသည်။
ပူးတွဲပါအက်ပ်သည် သင့်စကူတာအား လော့ခ်ချပြီး ရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။
ခေါက်သယ်နိုင်သောလျှပ်စစ်စကူတာ trottinette လျှပ်စစ် 10000w
၎င်းသည် ပြန့်ပြူးသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အတော်လေး အစွမ်းထက်ပြီး 10000W မော်တာများ (အမြင့်ဆုံး 20000W အထွက်နှုန်းဖြင့်) ကြောင့် တောင်တက်ကားစီးခြင်းကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး အဆင့်မြှင့်ထားသော 13in inflatable wheels များသည် 11in scooters များထက် အတက်အဆင်း မျဉ်းတားတက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျော်စီးခြင်းထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သော စီးနင်းမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးပါသည်။ လမ်း၌အဖုအထစ်။၎င်းသည် အမြင့်ဆုံး အလေးချိန် 225 ကီလိုဂရမ်ဖြင့် ပိုလေးသော မြင်းစီးသူကို ထိန်းထားနိုင်သည်။
နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကတော့ ဘက်ထရီကို ဖြုတ်တပ်လို့ရပြီး သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အားသွင်းပေါက်ပါရှိတာကြောင့် ၎င်းကို သီးခြားအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။စကူတာပြီးတော့ အပိုဘက်ထရီတွေလည်း ဝယ်လို့ရပါတယ်။သင်၏စကူတာအား အမြဲတမ်းအားအပြည့်သွင်းပြီး စီးနင်းရန်အသင့်ဖြစ်ရန် သေချာစေရန် သင့်ကျောပိုးအိတ်ထဲတွင် တစ်လုံးကို ဆွဲထုတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အလုပ်တွင်ထားခဲ့ကာ တစ်လုံးကို အိမ်တွင်ထားခဲ့နိုင်ပါသည်။
လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စကူတာ ခေါက်နိုင်သော 84V လျှပ်စစ်စကူတာ
လျှပ်စစ်စကူတာဝယ်ချင်သူ အများစုက ၀ယ်သင့်တယ်။monopattino အီလက်ထရစ်ကို.မည်သည့်စကူတာမှ အကွာအဝေး၊ အရှိန်၊ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းမှုနှင့် တည်ထောင်ထားသောအမှတ်တံဆိပ်မှဝယ်ယူခြင်းနှင့်အတူ စိတ်အေးချမ်းသာမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ပေးပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် monopattino elettrico စီးနင်းခြင်းကို အမှန်တကယ်နှစ်သက်ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် လူအများက ဘတ်စ်ကားများနှင့် ရထားများပေါ်တွင် လူစုလူဝေးမလုပ်လိုသည့်အချိန်တွင် အများသူငှာသွားလာရေးအတွက် အသုံးဝင်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဟု ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ပါသည်။
monopattino elettrico သည် မည်သည့်စကူတာမဆို စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။၎င်းသည် UL-certified ဖြစ်ပြီး၊ monopattino elettrico သည် စကူတာများနှင့်သာမက ကြီးမားသောရွေ့လျားသွားလာမှုအတွက်ပါ ရောက်ရှိလာသောအခါတွင် ပိုမိုတိုးတက်သောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။(ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါက စျေးဝယ်လုံခြုံရေးအစောင့်တွေစီးတာကို မြင်နိုင်တဲ့ self-balancing scooters တွေလုပ်ဖူးတဲ့ monopattino elettrico နဲ့အတူတူပါပဲ။)
စျေးနှုန်းသက်သာသော trottinette electrique အရွယ်ရောက်ပြီးသူလျှပ်စစ်စကူတာ 72v 10kw
လျှပ်စစ်စကူတာအီတလီတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အီတလီဥပဒေပြုချက်မှာလည်း အဆင့်ငယ်များဖြင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ရှင်းလင်းရန် အဓိကအချက်မှာ ဦးထုပ်ဆောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။
2019 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် စတင်အသက်ဝင်ခဲ့သော Toninelli အမိန့်အရ၊ စကိတ်စီးခြင်း၊ လျှပ်စစ်စကူတာနှင့် hoverboard များအတွက် ဦးထုပ်ဆောင်းရန် မလိုအပ်ပါ။ဒါပေမယ့် နောက်စာပိုဒ်မှာ ရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်း လည်ပတ်မှုကို အာရုံစိုက်ပါ။
Toninelli အမိန့်- monoskates နှင့် အီလက်ထရစ်စကူတာများ မည်ကဲ့သို့ လည်ပတ်နိုင်သည်
အကယ်၍ လွန်ခဲ့သည့်လအနည်းငယ်အထိ၊ segways၊ monoskates နှင့် hoverboards များအသုံးပြုခြင်းကို အမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိပါက၊ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုမှုသည် အီတလီအစိုးရအား micro-mobility မော်တော်ကားများဟု ခေါ်သည့် အထူးဥပဒေတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးနိုင်စေခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ 2019 တွင်ထုတ်ဝေသောတရားဝင်ဂျာနယ်တွင်ထုတ်ဝေသော Toninelli အမိန့်အရ၊ micromobility သည်မြို့ပြလမ်းများပေါ်တွင်လက်ထပ်နိုင်သော်လည်းမြို့ကြီးတစ်ခုချင်းစီသို့မဟုတ်နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီမှသတ်မှတ်ထားသောဧရိယာများတွင်သာဖြစ်သည်။
2019 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် အီတလီမြို့အများအပြားတွင် လမ်းအသွားအလာအတွက် စမ်းသပ်မှုများကို စတင်ခဲ့သည်။ဤသည်မှာ Milan၊ Verona၊ Turin၊ Catholicism နှင့် Rimini တို့ဖြစ်သည်။